बालाजुबाट ६ किलोमिटर दुरीमा ओशो तपोवन नामक ध्यान केन्द्र छ । त्यसको बारेमा अधिकांश नेपालीले कुनै न कुनै रुपमा सुनेकै छन् । हिजोआज तपोवनमा ध्यान गर्नेबाहेक बिदाको दिन घुमफिरका लागि जानेहरुको संख्यासमेत प्रतिदिन बढिरहेको छ । पछिल्लो केही महिनादेखि तपोवनका संस्थापक स्वामी आनन्द अरुण र ओशो तपोवनबारेका विभिन्न टीका टिप्पणी सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन् ।
यो आलेख ओशो दर्शन, ध्यान, योग, धर्म, अध्यात्म आदि विषयमा नभएर तपोवनको सन्दर्भमा अहिले देखिएको विवादको प्राविधिक पक्षमा केन्द्रित छ ।
ओशो तपोवनका सन्दर्भमा सतहमा आएको बहसमा यौटामात्रै मुद्दा छैन । आधा दर्जनजति विषय आपसमा जेलिएका छन् । त्यसमा केही विषय व्यावहारिक र केही नितान्त प्राविधिक छन् । विवाद लम्बिँदै जाँदा साइबर क्राइमको मुद्दासम्म पुगेको छ भने निकुञ्जमा कार्यरत एक कर्मचारीको सरुवा भएको खबरसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ ।
बाटो, पुल, जमिन र तटबन्ध
बाटो र पुलको निर्माण यो विवादको मुल विषय हो । तपोवनको दक्षिणपूर्वी भागबाट मोटरबाटो निर्माण गरिएको छ । मोटरबाटो अघि बढ्दै जाँदा पारिपट्टिको भवनसम्म जानका लागि मोटरेबल पुल निर्माण भएको देखिन्छ । मोटरबाटोको बीचमा खोला-खोल्सा परेपछि पार गर्न पुल निर्माण हुनु कुनै आश्चर्यको कुरा होइन । बाटो र पुल नितान्त प्राविधिक विषय हो । सरकारी खर्चमा गरिएको पुल र बाटोको निर्माण अन्धाधुन्ध भयो भन्ने तर्क सही होइन । बाटोमै पर्नेगरी जस्ताको तस्तै राखिएका केही रुखहरुले निर्माण कार्यसँगै पर्यावरणको बारेमा समेत थोरबहुत सोचिएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।
तपोवनको क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा निकुञ्जको नभएर बरु सार्वजनिक वनको केही भाग मिचिएको हुनसक्ने जानकारहरु बताउँछन् । जग्गा धनी पूर्जामा उल्लेखित क्षेत्रफल र साँध सिमाना हेरेर यो विषयको निरुपण गर्न सकिन्छ ।
सार्वजनिक जग्गा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले अतिक्रमण गर्नुहुँदैन । अतिक्रमण भएको खण्डमा सम्बन्धित निकायले त्यसउपर कानुन बमोजिम कारबाही गर्दछ । तर, त्यही विषयसँग जोडेर अमुक व्यक्ति वा संस्थाको स्वार्थपूर्तिको माध्यम बन्ने कि नबन्ने ? सचेत नागरिकले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने यहीँनेर हो ।
जहाँसम्म तटबन्धको विषय छ, त्यो आवश्यकताको आधारमा हुनुपर्छ र स्वाभाविक हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन । यी सबै विषयमा योजना निर्माण, बजेट तर्जुमा हुँदै निर्माण कार्यसम्म पुग्दा भएका त्रुटि तथा पहुँच, प्रभावको दुरुपयोगबारे सत्य तथ्य खोज्नु र कारबाही गर्नु सम्बन्धित निकायको काम हो । तर, बजारिया हल्लासँगै मुद्दालाई अतिरञ्जित गरिनु हुँदैन ।
ओशोको मृत्यबारेको रहस्य अद्यापि उद्‍घाटित भइसकेको छैन । ओशोका अनुयायीहरु संसारभर फैलिएका छन् । जानकारहरुका अनुसार पछिल्लो विवादको जड भारतको पुनास्थित ओशो फाउन्डेसन र नेपालको तपोवनबीचको हो । नेपालभित्र र विदेशमा समेत स्थापित सयौं कम्युनहरु नेपालको तपोवनसँग आबद्ध छन् । ओशोसँग सम्बन्धित दर्शनका सन्दर्भ सामग्री र स्रोतहरुको आधिकारिता कोसँग रहने र विश्वमा ओशोका अनुयायीहरुको आधिकारिक नेतृत्व कसले दिने भन्ने विषयसँग अरु स-साना विषय घोलिएर विवादको रुप लिएको तपोवनबारे जानकारहरुको भनाई छ ।
यसरी हेर्दा यो विवाद भारतको पुनास्थित ओशो फाउन्डेसन र नेपालको तपोवनबीचको आपसी टकराव हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । यो संघर्षमा नेपालका सञ्चार माध्यमहरुले कुनै एक धारलाई समर्थन गर्ने वा तटस्थ रहने भन्ने मूल प्रश्न हो । कसैको व्यक्तिगत र संस्थागत स्वार्थसँग जोडिएर सञ्चार माध्यमहरु तरङ्गित हुनु उदेकलाग्दो कुरा हो ।
सञ्चार माध्यमको कन्टेन्ट र नियत
संसारको जुनसुकै कुनामा घट्ने घटनासँग सम्बन्धित रहेर सार्वजनिक सरोकारको विषयमा बहस गर्नु सञ्चार माध्यमको व्यावसायिक धर्म हो ।
यी पंक्तिहरु लेखिरहँदा अमेरिकी टेलिभिजन च्यानल सीएनएनले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सीएनएनकी सम्वाददाता जिम एकोस्टालाई ह्वाइटहाउसमा दुर्व्यवहार गरिएको र उनको प्रेस पास रद्द गरिएको विषय अदालतसम्म पुगेको हो ।
विश्वभर सञ्चार माध्यमको उपस्थिति अनि चासोलाई नियन्त्रण र प्रयोग गर्ने/गराउने परिपाटी कुनै न कुनै रुपमा देखिन्छ, चाहे त्यो नेपाल होस् वा अमेरिका । नेपालमा पनि तपोवनलगायत अनेक विषयमा मिडियाको भूमिकाबारे बहस, छलफल भइरहेको छ । सञ्चार माध्यमहरु विवादित बनेका र प्रयोग भएका अनेक अनुभुति पनि हामीकहाँ छन् ।
अमुक व्यक्ति वा संस्थाविशेषको स्वार्थको पछाडि सञ्चार माध्यमहरु बहकिनु हुँदैन भन्ने पंक्तिकारको मत हो । चाहे जुनसुकै मुद्दामा किन नहोस् ।
नेपाली सञ्चार माध्यमहरुले कतिपय व्यक्तिगत मामिलामा समेत अनावश्यक चासो देखाउने गर्दछन् । सकारात्मक भन्दा नकारात्मक कुरामा बढ्ता चासो राख्नु, अरुलाई कमजोर देखाएर आफु बलियो देखिन रुचाउनु समग्र नेपाली समाजको मनोविज्ञान हो । यही कमजोर मनोविज्ञानलाई उपयोग गरेर कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई कमजोर पार्ने, सबल देखाउनेजस्ता अनेक खेल हुने गर्दछन् । यस्ता कैयन् उदाहरण नेपाली र सञ्चार माध्यमसँग जोडिएका छन् ।
तपोवनकी एकजना साधक (जो पेशाले नर्ससमेत हुन्) र स्वामी अरुणको विषयसमेत यही सोचसँग जोडिएको छ । त्यो घटनाको विषयमा भएको दुष्प्रचारको कारण दुईजना व्यक्ति साईबर क्राइमको मुद्दामा जेल जानुपरेको छ । सम्बन्धित मान्छेले कुनै गुनासो वा आपत्ति प्रकट नगरेको अवस्थामा तेस्रो पक्षले अनावश्यक चासो राखेर बद्‍नियतपूर्वक तथ्यलाई तोडमोड गरेका कारण उनीहरु जेल जानुपरेको हो । अन्यथा त्यो जेल जानुपर्ने अवस्था निम्तिने घटना नै होइन । दुई व्यक्तिबीचको सम्बन्ध र व्यवहारलाई नियतवश सार्वजनिक रुपमा फैलाउनु सर्वथा गलत हो । यसलाई अन्य विषयसँग जोडेर हेर्नु जरुरी छैन ।
कुनै घटनासँग असम्बन्धित पक्षको अनावश्यक चासोले जेलसम्म पुगिने रहेछ भन्ने पाठ नेपालका अनलाइनहरुले पनि सिक्नु जरुरी छ । यस्ता घटनाका सन्दर्भमा प्रेस स्वतन्त्रता र कन्टेन्टको विषय सेकेन्डरी हो ।
ओशो तपोवनले आध्यात्मिक चिन्तनको विकासका अलावा राजधानी, राजधानी बाहिरका जिल्ला र विदेशसम्म पनि एक व्यवस्थित ध्यान केन्द्रको पहिचान बनाएको छ । यसको आर्थिक सामाजिक प्रभावका विषयमा बेग्लै अध्ययन आवश्यक भए तापनि कुनै न कुनै रुपमा त्यसको सामाजिक र आर्थिक महत्व छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न गाह्रो छैन । पंक्तिकारको बुझाइमा तपोवन कुनै यौटा धर्मको बिस्तारमा केन्द्रित संस्था होइन । नत निजी वा व्यावसायिक संस्था नै हो ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग हुने, कुनै अमुक संस्थाले गर्ने निर्माणकार्यले प्रतिकुल वातावरणीय प्रभाव पार्नेजस्ता विषयमा निगरानी गर्नु र सचेत गराउनु सञ्चार माध्यमको धर्म हो । तर, यही व्यावसायिक धर्मको आवरणमा अनावश्यक विवाद निम्त्याउने र व्यक्ति तथा संस्थाको बद्‍नियतपूर्वक दुष्प्रचार गर्नुलाई किमार्थ सही मान्न सकिन्न ।
ओशो तपोवनका सन्दर्भमा केही सञ्चार माध्यमले व्यक्तिविशेषलाई ‘एक्स्पोज’ गर्ने हदसम्मका सामग्री प्रकाशन गरेको पाइन्छ । अन्ततः त्यसले आफ्नै विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्नेभन्दा बढी केही उपलब्धि हासिल हुँदैन । जहाँसम्म अमुक व्यक्ति हिरो हुने विषय छ, त्यो कम्तीमा नेपाली समाजका लागि नौलो होइन । यस्ता हिरोहरु मौसम मौसममा देखा परिरहन्छन् ।
तपोवनको तरङ्ग आउनुको पृष्ठभूमि के थियो भन्ने समयक्रममा खुल्ने नै छ । तर, जुन ढंगले यो विषयमा विवाद र बहस भयो त्यो बेठीक र संकुचित छ भन्ने बुझ्न संस्थासँगको निकटता, आबद्धता र समर्थक भइराख्नु पर्दैन ।
आँखा अस्पताल निमार्णा गर्न डेढ करोड दान
मन्त्रालयले टेरेनन् अख्तियारलाई
1. आँखा अस्पताल निमार्णा गर्न डेढ करोड दान
2. पशुपतिमा थरीथरीका चन्दन
3. मन्त्रालयले टेरेनन् अख्तियारलाई
4. जापान जाने श्रमिक भाषा र सिपमा दक्ष हुनुपर्ने
5. पेट्रोल पम्पमा भारतीय लर्को, कमिसनको लोभले नेपालीलाई बेवास्ता
जापान जाने श्रमिक भाषा र सिपमा दक्ष हुनुपर्ने
पेट्रोल पम्पमा भारतीय लर्को, कमिसनको लोभले नेपालीलाई बेवास्ता
थाइल्यान्डमा भएको आम निर्वाचनमा सैन्य समर्थित दलकाे अप्रत्यासित नतिजा